WD Yangu Kumba Kumba, Kunetseka-Mahara NAS Kuongorora | Ndinobva mac
WD Yangu Cloud Kumba, Kunetseka-Mahara NAS Kuongorora
Isu tiri munguva iyo gore rekuchengetedza rinotonga. Isu tiri kuwedzera kushandiswa kuisa zvinyorwa zvedu, mapikicha uye ese marudzi emafaira kune edu avanofarira kuchengetedza gore, ingave Google Drive, iCloud, Dropbox kana chero chii. Asi pane zvekare sarudzo yekugadzira rako pachako gore, pasina kuvimba nevechitatu mapato, uye izvo zviripo NAS.
Kutyora zvisaririra zvekuti idzi NAS ndedzevanyanzvi chete nekuda kwekuoma kwavo, WD inotipa iyo nyowani My Cloud Home, network-dzakabatana madhiraivhu akagadziriswa mumaminetsi mashoma uye anokupa iwe kugona kunakidzwa nemafaira ako kubva chero kupi uye kunyangwe kuisa Plex kuti unakirwe nezvako zvemultimedia. Mushure mekuzviedza, ndazvisimbisa kuti ndizvo chaizvo zvandaida, uye ini ndichakuudza kuti sei.
WD My Cloud Imba, 6TB,...
1 Chii chinonzi NAS?
2 Magadzirirwo WD Yangu Cloud Kumba
3 Yangu Cloud Kumba Kugadziriswa
4 Zvirongwa zveIOS uye macOS
5 Kuisa Plex yezvinyorwa zvemultimedia
6 Zvikanganiso zvinoda kugadziriswa
7 Maonero emupepeti
Chii chinonzi NAS?
NAS ndicho chidimbu cheNetwork Yakanamatira Kuchengetwa. Kune avo vasingazive zvandiri kutaura nezvazvo, kana avo chete vanoziva izwi iri, iri rakaomarara diski (kana akati wandei) iro zvakabatana kunetiweki yako kuitira kuti zviwanikwe kubva pamidziyo iri mumba mako, uye kunyangwe kubva kunze kwayo. Ivo "ako ega gore ekuchengetera", nekuti pese paunenge uine internet unogona kunakidzwa nezvose zvirimo neNAS yako.
Nyika yeNAS yakaoma kunzwisisa, ine mamodheru asingaverengeke nemitengo zvinoenderana nemikana yavanokupa. Asi isu tinogona kupfupisa nekutaura kuti iwo madiki makomputa (akawanda kana mashoma simba, zvinoenderana nemutengo) mairi unogona kunyange kuisa kunyorera sePlex kana Torrent vatengi, kurodha zvirimo usingade komputa iripo zuva rese. Nekugona kuwana mafaera ako kubva chero kupi, iwe unogona kunyange kutamba akateedzana kana mabhaisikopo aunayo paNAS yako kubva kunze kwemusha, sekureba sekunge iwe uine internet yekubatanidza iyo inobvumira iyo.
Magadzirirwo WD Yangu Cloud Kumba
Chitarisiko chayo hachina kumbosiyana neicho chechero rakajairwa dhiraidhi, kunyangwe iri yakati kurei. Western Dhijitari yakavamutsiridza nehunyanzvi nechitarisiko chemazuva ano uye chakangwara, panongova nechepakati mwenje LED inoratidza kuti irimo uye kuti inoshanda nemazvo. Inowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana, kubva pa2 kusvika 16TB (ine sarudzo yemadhisiki maviri), uye kuve dhiraivhu rakaomarara rine peculiarity iyo inoiparadzanisa neiyi: haina USB yekubatanidza.
Kumusana tinako iyo Ethernet yekubatanidza iyo yatinozobatanidza diski yedu yakanangana neiyo router, nekuti ndicho chinhu chega chaunoda kuti tikwanise kuwana zvemukati. Zviripachena kuti zvakare zvinodikanwa kuti ubatanidze magetsi, uye kunyangwe iwe uchiona USB chinobatanidza kumusana, pandakati handina, ndaireva kuti haina kushandiswa kuiisa kune chero komputa. Iyo USB yekubatanidza imwe diski (uye nekudaro uiwedzere) kana kubatanidza ndangariro ye USB nemifananidzo kana mafaera uye wozvirodha kudisk zvakanangana.
Iyo Ethernet chiteshi inobvumira kuendeswa nekumhanyisa kusvika ku1000Mbps, uye diski ine 1GB ye RAM ndangariro. Iyo Realtek Quadcore processor iri mukutarisira manejimendi mashandiro ese e diski. Chero ani anonzwisisa nyaya iyi anozoona kuti iri discrete NAS mune zvakatemwaNdokusaka chinyorwa chakanzi "chakakodzera munhu wese." Gare gare iwe uchazoziva kuti sei ndichitaura izvi.
Yangu Cloud Kumba Kugadziriswa
Izvo ndezvekutanga se plug uye kutamba. Nekuenda zvakabatana zvakananga kuburikidza neEthernet kune iyo router haufanire kuipa iko kunetiweki yako, uye kubva kune chero chishandiso chakabatana neWiFi yako unogona kuchigadzirisa mumaminetsi mashoma kuwana webhu My Cloud Makadii. Pinda madhijitari mashoma uye wakagadzirira kuenda, izvo zvakapusa uye nekukurumidza iwe unenge uine yako NAS yakagadzirirwa kuti ishande nayo.
Kuti utarise zvemukati uye nekugadzirisa mamwe ese emabasa eNAS, iwe uchazoda kunyorera iOS y macOS (zvakare inowanikwa paWindows uye Android). Iko kumisikidza kuri nyore sezvo sarudzo dzakapihwa dziri shoma: wedzera vashandisi kudiski, gadzirisa matanho ekuchengetedza senge password, Kubata ID kana Chiso ID kuti uwane iyo application uye shandisa otomatiki kutevedzera mafoto uye mavhidhiyo kubva ku iPhone yako kuenda kuNAS. Kune vakanaka nevakaipa, hapana akawanda maitiro ekugadzirisa pane ino My Cloud Home.
Zvirongwa zveIOS uye macOS
Sezvatakataura, mukana mukuru weNAS iri kugona kuwana zvirimo kubva chero kwatinowana mukana weinternet, uye isu tichazadzisa izvi nekuda kwekushandisa Izvo isu tisati tataura newe uye isu takapa zvekuburitsa zvinongedzo.
Iyo MyCloud kunyorera yeIOS ichatibvumidza isu kuona zvese zvirimo zveNAS. Zvichaita kunge muongorori wefaira watinogona kuona mafoto, mavhidhiyo, zvinyorwa ... uye kuvhura iwo mune mamwe mashandisirwo, kugovana navo kuburikidza nekutumira mameseji maapplication kana kudhawunirodha kune yedu kifaa. Uye zvakare isu tinogona zvakare kugadzirisa iyo backup yeedu reel, zvekuti mapikicha nemavhidhiyo atinotora ne iPhone yedu anozoteedzerwa kuNAS otomatiki. Kana iwe ukashandisa iCloud raibhurari, iwo mapikicha anoteedzerwa kuNAS ndiwo ekutanga, kwete zvigunwe zviri pane yako iPhone, iri inhau huru.
Sefaira rekutsvagisa kana backup, iko kushanda kunoshanda mushe, iri kukurumidza uye kufamba-famba kuri intuitive. Kudzoreredza zvemultimedia zvemukati zvinogoneka kubva kuchishandiso icho pachacho, iyo inokutendera iwe kuti usarudze iyo mhando yevhidhiyo kuti ifananidze yako yekubatanidza kumhanya. Inogona kusimudzira aesthetics kana ruzivo rwema multimedia mafaera, asi iro harisi dambudziko nekuti rinotendera kumisikidzwa kweFlex, inozviita zvinoshamisa.
PaMac iyi My Cloud Home inoita senge chero dhisiki rakabatana neiyo USB yekombuta yako. Iyo WD Discovery application ichaita kuti iratidzike pakombuta yako kana padivi repashure reKutsvaga kwako, uye iwe unogona kuivhura senge chero dhisiki remuno, kunyangwe iwe uri kunze kwenzvimbo yako yekutenderera. Iko kusanganiswa nehurongwa hwakakwana, uye kuri kubudirira kuzvibata seizvi nekuti zvinonyanya kugadzikana uye zvakapusa kune vese vashandisi. Kudhonza mafaera kubva kune imwe chengetedzo kuenda kune imwe kunogoneka nekuda kwekubatanidzwa uku, uye kana iwe usina komputa yako neyakaiswa application, usazvidya moyo, nekuti nechero browser unogona kuwana account yako My Cloud uye ona zvemukati.
Kuisa Plex yezvinyorwa zvemultimedia
Chii chinonzi NAS isina Plex? Kana iwe uchida kuishandisa kuchengeta uye kuona zvemultimedia zvemukati, zvinotoda zvekumanikidza kushandisa Plex, uye nerombo rakanaka WD My Cloud Home inokutendera iwe kuti uiise iyo nekamwe chete. Haufanire kuita chero chinhu chisingazivikanwe, kana kurodha pasi mafaera nekumisikidza kuisirwa ... kamwe chete uye Plex ichave yakamirira iwe kuti uwedzere yako multimedia zvemukati. Mifananidzo, mimhanzi, mafirimu, akateedzana ... iwe uchakwanisa kuona zvese zvakadzama pakombuta yako, iPhone, iPad uye pane yako terevhizheni.
Uine Plex iwe unogadzira yako multimedia server iyo iwe yaunogona kutamba pane inoenderana zvishandiso, asi ine zvainogumira. Kune mafaera mahombe, senge mkv mabhaisikopo uye anopfuura 20GB muhukuru, kutamba hakuna kutsetseka. Kukanganisa kwePlex mune izvi kunozivikanwa, uye Iyi NAS Yangu Cloud Home haina simba rekuridza aya mavhidhiyo, asi izvi zvakare zvine mhinduro: Simbisa.
Kana iwe ukagadzira iyo DLNA server nePlex, ine Infuse iwe unogona kubereka zvese zvirimo pasina zvinonzwisisika matambudziko. Iine maapplication eIOS uye tvOS, ndiyo mhinduro kwayo yeavo vakaremara mavhidhiyo asingatarisirwe nePlex player.. Zvese zvaunoda kuti unakirwe neraibhurari yako yemultimedia ndiyo Plex server yakaiswa pane yako Cloud Cloud Kumba, uye Simbisa pane ako madhivha.
Kunze kwePlex izvi WD Yangu Cloud Imba inotsigira Alexa, IFTTT uye inokutendera iwe kuendesa zvirimo zvaunazvo mune mamwe masevhisi egore akadai seDropbox kana Google Drive. Aya maapplication akaisirwa zviri nyore sePlex kubva kune nharembozha kana kubva pakombuta yako.
Zvikanganiso zvinoda kugadziriswa
Isu takaratidza hunhu hwakakura hunowanikwa neiyi WD Yangu Cloud Home, asi zvakare ine zvimwe zvinokanganisa. Nhau dzakanaka ndedzekuti zviri nyore kugadziriswa kuburikidza nesoftware inogadziridza, saka ndinovimba WD ichashanda pane izvo munguva pfupi. Chimwe chezvikanganiso chikuru ndechekuti haugone kupa mumwe mushandisi mukana kune yako diski. Izvi zvinofanirwa kutsanangurwa mushe, nekuti unogona kuzviita, asi kuitira kuti ichengetedze mafaera ayo, kwete kuti iwane zvirimo. Unogona kugovana mamwe mafaera nevamwe vanhu, asi kwete zvese zvirimo mudisc. Kana iwe uchida kuti mumwe munhu awane mukana, iwe unofanirwa kuisa iyo application uye shandisa yako wega account.
Kukanganisa kwechipiri kwakabatana neiyi, uye zviri nyore chete kugadzirisa: haugone kuve nemazhinji maMy Cloud anotyaira kuaccount yako. Ini handikwanise kuve nerekodhi kumba uye imwe muhofisi mangu, iko kushanda hakuitsigire. Mhinduro iyo WD inopa ndeyekuti iwe unyore neimwe email uye uchinje huwandu hwacho nguva imwe neimwe yaunoda kuwana diski, iri pachena isingatsungiririki.
Iyo WD Yangu Cloud Kumba dhiraivha ndiyo yakanakisa sarudzo kune avo vanoda iyo NAS iyo iri nyore kubata uye kugadzirisa pamutengo unokwezva kwazvo. Kune izvo zvinodhura chete "nyaya" yeNAS yakajairika, dhisiki iri rinokupa kuita kwakanaka, kuvimbika uye kubatana kwechokwadi kunokosheswa neIOS uye macOS. Kugona kugadzira Plex server yako yemultimedia zvemukati kana kuita otomatiki backup ye yako iPhone mafoto zvimwe zvezvinhu izvo izvi zvidiki asi zvinobudirira NAS zvinotipa. Zvipingamupinyi zvaro zvikuru zvinoenderana nemvumo yevashandisi vakawanda kana ma diski akawanda, ayo kune rumwe rutivi anogona kugadziriswa zviri nyore kuburikidza nesoftware inogadziridza. Nemitengo inotangira pa € ​​150 (2TB) kusvika ku € 700 (16TB) mukati Amazon, ndeimwe yeNAS inodhura kwazvo inogona kutengwa.
WD My Cloud Imba
Dhizaini yazvino uye yakangwara
Kubatanidzwa kwemapurogiramu nehurongwa
Nyore kushandisa mafomu
Simba rakatemwa rinoonekwa neinorema "mkv" mafaera
Hazvibvumiri vashandisi vazhinji vaine mukana wekugovana
Hazvitenderi akawanda discs kuverengerwa mune imwechete account
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » WD Yangu Cloud Kumba, Kunetseka-Mahara NAS Kuongorora
Mangwanani akanaka, ndine mibvunzo yakati wandei, regai tione kana uchikwanisa kundipindurira? Chekutanga ndechekuti dhisiki iri rinoita makopi mumuchina wenguva, kana ini ndinofanira kuzviita nemaoko kubva kuMac yangu, uye yechipiri ndeyekuti kana ndichigona kuisa mapikicha kubva kukamera yangu yeflex ine wifi kune diski kubva chero kupi kune wifi yekubatana. iwe zvikuru,
Incase Inotangisa MacBook Pro Sleeve Nebhatiri Inosanganisirwa
Iyo iMac Pro yave kuwanikwa mune zvimwe zvitoro zveUS pasi pe $ 4.999